Kenya oo dib dhigtay go’aanka ay ku xerayso xeryaha Dhadhaab iyo Kakuma | Allgalgaduud.Com
Home Dhacdooyinka Todobaadka Kenya oo dib dhigtay go’aanka ay ku xerayso xeryaha Dhadhaab iyo Kakuma
Kenya oo dib dhigtay go’aanka ay ku xerayso xeryaha Dhadhaab iyo Kakuma
Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday inay dib u dhigtey xiritaanka xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kakuma illaa dhamaadka bisha Juun ee sanadka 2022-ka.
Talaabadan cusub ayay dowlada Kenya u gudbisay Hay’adda Qaxootiga ee Qaramada Midoobay u qaabilsan marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano UNHCR.
Wasiirka amniga gudaha ee Kenya Fred Matiangí wuxuu kaloo sheegay in mas’uuliyiin ka kala socda dowladda Kenya iyo hay’adda Qramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ay isla garteen in hannaanka xeryahaas lagu xirayo la bilaabo 5-ta bisha May ee 2022-ka.
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR waxay sheegtay in go’aankan uu saameyn ku yeelan doono dadka qaxootiga ah ee ku nool Kenya xilli uu dunida saameeyay safmarka Karoona.
Hay’adda UNHCR waxay hore u sheegtay iney sii wadi doonto wadahadallada ay arrintan kala yeelaneyso mas’uuliyiinta Kenya.
Maxkmada sare ee dalka Kenya ayaa dhawaan amartay in la laalo amarka dowlada ee ah in la xiro xeryaha.
23-kii Maarso, Kenya waxay u sheegtay UNHCR inay ku dhawaaqdo qorshe ku saabsan xiritaanka xerada qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kakuma laba toddobaad gudahood.